I-QGIS, i-PostGIS, i-LADM-kwiKhosi yoLawulo loMhlaba ephuhliswe yi-IGAC-Geofumadas
NgoJulayi, 2017 cadastre, Okufumaneka, Geospatial - GIS, qgis
Ekudityanisweni kwamanyathelo ahlukeneyo, iminqweno kunye nemiceli mngeni ehlangabezana nayo eColombia yokugcina ubunkokheli kwicone esemazantsi kwimicimbi yejografi, phakathi kukaJulayi 27 no-Agasti 4, iZiko loPhando noPhuhliso loLwazi lweJografi- i-CIAF yeGeographic Institute U-Agustín Codazzi uza kuphuhlisa iKhosi: Ukusetyenziswa komgangatho we-ISO 19152 (uLawulo loMhlaba weDomain Model) kunye nokusetyenziswa kolwimi lwe-INTERLIS kwisakhelo seziSeko seDatha yeZiseko.
Ukugwetyelwa ingaphezulu kwe kuyabonakala, ekubeni woLawulo loMhlaba ngumba oluye kuqala kumazwe amaninzi, okubangelwa ngezizathu ezahlukeneyo zentlalo, ezoqoqosho kunye nezendalo. Le boom technology ukusuka kwiminyaka 90 u uluhlu amathuba ukunika iinkonzo ezintsha nangcono iinkcukacha ezingomhlaba kunye namalungelo impahla, sibambe namandla iindlela connectivity, edatha spatial, isoftware kunye nezixhobo. Uxinzelelo Lo zeteknoloji kunye nemfuno bamaziko karhulumente nawabucala, kulinganiswa ngokusetyenziswa kwemigangatho; Kulo mongo inyathelo Cadastral 2014 1995, yaye inxalenye ngokwenza layo Standard ISO 19152 2012 kuvela kulo nyaka.
Amazwe amaningana ehlabathini lonke afuna ukuphumeza i-LADM kwiCadastre yabo, iiRejista zeeRejista zeeNdawo kunye neZithuba zoLwazi lweZibonelelo. I-INTERLIS ulwimi oluye lwabonakalisa ukuba lusebenza kakuhle ekudalweni kwezixhobo kunye neendlela zokuququzelela ukusebenzisana nokudluliselwa kolwazi lwe-geospatial.
IColombia enye yeli lizwe, ekuhlanganiseni ukuhlaziywa kwezenhlalakahle, zomthetho kunye neziko lokucwangcisa izicwangciso zokusebenzisa inzuzo ye-LADM njenge-axis ehambayo yokuphathwa kwamandla omhlaba. Okwangoku, iphrofayili yesizwe iye yaphuhliswa, iziphakamiso zeeprofayile ezikhethekileyo kunye nezixhobo zisebenzisa ulwimi lwase-INTERLIS.
Le meko yenza ufaneleke imfuneko yokuba Agustin Codazzi Institute ihlanganise ngaphakathi umnikelo wayo wokufunda ikhondo esenokuba iyafumaneka kwi zenzululwazi iingcali emhlabeni, inxaxheba kumanqanaba ahlukeneyo kumjikelo yolawulo lomhlaba ngendlela ehlanganisiweyo.
Ekugqibeleni ke kulindeleke abathathi-nxaxheba babe izakhono zobugcisa kunye cognitive kwi-nxaxheba, Data Spatial Neziseko kunye ukuyazi standard LADM wolawulo komhlaba kunye nokusetyenziswa INTERLIS ulwimi ukudala izixhobo kunye neendlela ukuququzelela ukwamkelwa kwabo nozalisekiso.
Ngokuqinisekileyo ikhosi ayibalulekanga nje kuphela, kodwa inomdla kwindibaniselwano enayo phakathi kwendlela yethiyori kunye nokuzilolonga okusebenzayo. Ubude ziiyure ezingama-32, ngeentsuku ezine zihanjiswe kwiiveki ezimbini (ngoLwesine nangoLwesihlanu) kwaye zakhiwe kwiibhloko ezintathu:
Iziqhelo, ezibandakanya iingcamango ezisisiseko malunga nokuphathwa ngokugxila kwimimandla kunye nemingeni ye-2034 Cadastre, izibonelelo zendawo yolwazi, imiqathango yolwazi lwamazwe ngamazwe kunye nolwazi lweenkcukacha.
Ibhloko yesibini ibandakanya iziseko zethiyori ye-LADM, iprofayile yaseColombia yokwamkelwa komgangatho we-ISO 19152 kunye nokusetyenziswa kwamatyala asetyenzisiweyo eCadastre, kwiRegistry yePropathi nakuCwangciso loMmandla. Kwakhona kule bhloko bazisa imigaqo-nkqubo yolwimi lwe-UML.
Kwibhloko yesithathu ngokwenza ukwakha umfuziselo LADM lula kulandela ecetywayo ngokusebenzisa INTERLIS evela semantics zabo ukusuka ikhowudi, ukuba basebenzise izixhobo ezifana UML Umhleli kunye ili2pg, ngazo isakhiwo data yakhiwe zokuhamba komsebenzi zejografi PostgreSQL / PostGIS, isizukulwana data kwi imodeli usebenzisa QGIS Java, kumazwe angaphandle, ukuqinisekiswa kunye ukulayisha data ukubonisa ukusuka umbukeli emajukujukwini.
Ngamafutshane, ngumzamo onomdla wokuba ngeli xesha unenkxaso yeNtsebenziswano yezoQoqosho noPhuhliso (i-SECO) ye-Embassy yaseSwitzerland.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Webinar: 5 zinto zixabisekileyo ntoni software CAD
Post Next Ndinedatha yeLiDAR - ngoku kuza kwenzeka ntoni?Okulandelayo »
Ukuphendula nge-6 kwi-QGIS, kwi-PostGIS, kwi-LADM-kwiKhosi yoLawulo loMhlaba ephuhliswe yi-IGAC
Ndihlala ndi-geofumadas kwaye ndilindele ulwazi kule khosi yolawulo lomhlaba.
Phantsi Victor M. Perez uthi:
I plug-in iyaphuhliswa yi-Project for Ukuphuculwa of Administration loMhlaba e Colombia, likaRhulumente Secretariat for Economic Affairs (Seco), Government of eSwitzerland, ecaleni a ynton le-Confederation, ezesizwe Switzerland INTERLIS zisetyenziswa exchange standard nokuba ngumzekelo. I iPlug-baya kuba evulekileyo, ezamahala nevulelekileyo yemvelaphi kwaye downloaded ngokukhululekileyo for QGIS.
Yenzelwe ukushicilelwa kwedata ephathelene noLawulo lweMhlaba kwindawo ethile ngqo: kuthatha njengesiseko semodeli yedatha (iiklasi ezibandakanyekileyo, ubudlelwane babo kunye neengxaki ezithintekayo), kwimeko yeColombia, i-LADM-COL, kunye eyakha indawo yokuhlela, kamva inikezela isikhombisi esibonisa ukuhlela ngokusekelwe kwiimfuno zomzekelo. Ikwasebenza nakwiindawo zokuqinisekisa kunye nokuchithwa kwedatha.
USamuel Mesa uthi:
Molo, ndingathanda ulwazi olungakumbi malunga ne-plugin, oku kungafikeleleka ngokukhululekileyo, njengoko unokukhuphela kwaye uzame iplagin
I-IGAC iceba ukuyiguqula ikhosi ngaphakathi kwinqanaba layo loqeqesho. Njengoko ndixeliwe, kwiinyanga nje ezimbalwa inokufumaneka ngokupheleleyo.
Ndicebisa ukuba ndiyazi oko i-ICDE ipapasha
david fernando urrelo uthi:
Ngendlela efanayo ndandinomdla kodwa ngeyona ndlela, ukusuka eBolivia. dfernando.urrelo@gmail.com
Kulungile, yenza uhlobo oluthile lokupapashwa malunga nekhosi, ndivela eArgentina ndiyakuthandayo kule ndaba